अलग अन्तिम दिन सबै व्यापार सेट? कारण छ कि यो गरिरहेको तपाईं रोक्नु पर्दछ!
मान्छे काम घर लिन गर्दा, त्यहाँ अन्तिम क्षण सम्म सबै स्थगित गर्न अनुमति धेरै प्रलोभन छन्। तपाईंले पहिले नै सेट अप र डेस्क मा बसे भने पनि, यो ढिलासुस्तीको आफ्नो prehensile हतियार मा तपाईं अवशोषित गर्दैन होइन। तपाईंको ध्यान तुरुन्तै थप रोचक कुराहरू सरेका। तपाईं चलचित्र समाचार रुचि हो, एक इलेक्ट्रोनिक मेलबक्स मा आगमन इमेल, सामाजिक सञ्जाल र सेलिब्रिटी गफ मा एक सूचना। अन्त मा, तपाईंले चाहनुहुन्छ कि, त्यसपछि तपाईं एक झपकी महसुस आक्रमण महसुस। सुत्न, भोलि सम्म काम स्थगित गर्ने निर्णय। र भोलि, यो परिदृश्य बाहिर फेरि प्ले। ध्वनि परिचित, छैन यो गर्छ? दुर्भाग्यवश, ढिलाइ हाम्रो जीवन अव्यवस्था मा छर्न सक्षम छ। तर हामी किन महत्त्वपूर्ण कुराहरू बन्द राख्दै राख्नुहुन्छ?
ढिलासुस्तीको के हो
यहाँ लागि वैज्ञानिक शब्द छ "यसको आफ्नै दायित्व बच।" ढिलाइ - दैनिक जीवन, हामी शब्द थप सरल र सीधा छ प्रतिस्थापित छ। तिनीहरूले मेरो बहिनी लागि वर्तमान एक जन्मदिन किन्न चाहनुहुन्छ जब हामी धेरै, अन्तिम मिनेट सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तर यो मामला मा हामी खरीद प्रक्रिया देखि खुशी प्राप्त छैन। हामी जानाजानी तनावपूर्ण स्थितिमा आफूलाई ड्राइव। ढिलाइ को कारण "योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता" को अर्थमा छ। धेरै मानिसहरू कुशलतापूर्वक आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्न सक्षम छैनन्। र यो एक पटक काम भने, यो फेरि र फेरि काम गर्छ। त्यसैले त्यहाँ पुरानो procrastinators छन्।
यो जिम्मेवारी limbic Cortex छ
जब तपाईं बन्द सोच्न महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न सुरु यो बानी हाम्रो ग्रह को सबै बासिन्दाहरू प्रभावित छ। कुनै क्षमा गर्नुहोस, तर वास्तवमा को मात्र जैविक विवरण छ। वास्तवमा, ढिलाइ नगर्न ताकि हाम्रो मस्तिष्क तार छ। तपाईं भविष्यको लागि योजना बनाउने गर्दा, तपाईं frontal Cortex संलग्न, तर यो यी योजना कार्यान्वयन गर्न आउँछ जब limbic प्रणालीमा आउँछ। को limbic Cortex यो भयातुर सिस्टम मा एक शक्तिशाली प्रभाव छ, वातावरण र भावना जवाफ। तपाईं, पाठ्यक्रम, एक नयाँ परियोजना मा काम लिन खुसी, तर अब सहकर्मीहरुका साथ सञ्चार, कार्यालय वरिपरि झुन्डिएको हुनुहुन्छ सजिलो। Frontal Cortex आफ्नो भावना र चाहना भन्दा कुनै त्यस्तो शक्ति छ। तपाईं ढिलाइ adversely अन्तिम परिणाम असर आफैलाई विश्वस्त छ। अर्को हप्ताको लागि सञ्चालन स्थगित गर्न बहाने रूपमा जीव प्रयोग नगर्नुहोस्।
ढिलासुस्तीको महंगा छ
एक पछि मिति मा महत्त्वपूर्ण कुराहरू अलग राख्दै, तपाईं आफ्नो शरीर बलियो तनाव उजागर पर्दाफास। दुर्भाग्यवश, हामी यसलाई नियमित रूपमा गर्छन, तर यो जीवन को सबै क्षेत्रमा असर गर्छ। तपाईं कर फिर्ती फाइल लागि आवश्यक कागजातहरू सङ्कलन, उपहार खरीद, बैंक खाता भुक्तानी स्थगित: बस धेरै disorganization कसरी आफ्नो कार्यहरू मा लाग्छ। तपाईं घरमा सामान्य सफाई राख्नु, आफ्नो आमाबाबु एक यात्रा, ग्राहकहरु गर्न भनिएको र त्रैमासिक प्रतिवेदन काम। डाक्टर पनि एउटा यात्रा, यो देखिन्छ, तपाईं अचानक कटि क्षेत्रमा राहत छन् किनभने, रद्द गर्न लागेको छ। तपाईंले यी सबै ढिलाइ नपुगेको भने, दुःखी तस्वीर उभर। आफ्नै आलस्य र disorganization को मद्दतले मानिस सम्पूर्ण रूपमा जीवन को आफ्नो गुणस्तर impairs।
ढिलासुस्तीको तपाईं कम उत्पादक बनाउँछ
तपाईं अवस्थामा दैनिक सूची पालन गर्दा वा गर्छन् आफैलाई सहुलियत दिन अनुमति, तपाईं धेरै कम अवस्थामा गरिरहेका छन् मूल योजना भन्दा। केही मानिसहरू राम्रो काम गर्न, हावा को ढिला सुस्ती उजुरी गर्नुस् चाहिन्छ भनेर दाबी गर्छन्। हामी "दबाब" काम गर्न प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरु को श्रेणी बारेमा कुरा गर्दै छन्। तिनीहरूले उच्च तनाव को अवस्था फस्टाउँछन्। तर वास्तवमा, पनि विश्वस्त अल्छी आफ्नो फाइदा यो तनाव तिर्न सक्दैन। र क्रोनिक procrastinators मुख्य जो बीच इन्टरनेटमा पहुँच छ अलमल्याउने, धेरै सामना गर्न छ। सामाजिक मिडिया मात्र ढिलाइ संग अवस्था worsen। तपाईं पनि अलमल्याउने को प्रभाव अन्तर्गत छन् भने, त्यसपछि तपाईं स्थिर विकल्प आफ्नो मस्तिष्क राख्न: काम, वा वर्ल्ड वाइड वेब मा बाहिरै। तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो कुरा हो, यो पूर्ण काम प्रक्रियामा इन्टरनेटको प्रभाव निर्मूल।
ढिलाइ रीस उठाउनु
वैज्ञानिक अध्ययन पुरानो procrastinators थप तनाव ग्रस्त र बस अगाडि सार्न गर्ने मानिसहरूलाई राम्ररी भइरहेको तुलना कम भावनात्मक महसुस भनेर देखाउँछ। तपाईं केवल एक रातको लागि परियोजना मा काम राख्न भने पनि, आफ्नो स्नायु प्रणाली यो वास्तवमा गर्न प्रतिक्रिया समय छ। यो तपाईं खातामा आफ्नै स्वास्थ्य लिएको औसत गति गणना छ, तर खातामा शक्ति majeure कारक को प्रभाव लिने छैन जस्तो देखिन्छ। यो आफ्नो शरीर राख्दै अघि अन्तिम घण्टा बलियो तनाव संग सामना छ हो। कहिल्यै विचार निस्क्यो टाउको मा तपाईं हो: "म किन अघि काम गर्न बसे छैन? जो चुपचाप आफ्नो काम गरे हुनेछ। " तपाईं दबाब काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तपाईं सबै प्रक्रियाहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसैले, तपाईँलाई भयातुर अन्यसँग तुलना मा प्राय छन्।
यो हृदयमा प्रतिबिम्बित छ
निस्सन्देह, समय सीमा र स्थिर तनाव को एक पुरानो संचय आफ्नो हृदयको कामकाज प्रभावित गर्न सक्दैन। उच्च रक्तचाप, हृदय दर, बारम्बार टाउको दुखाइ, पाचन समस्या: र त्यहाँ हृदय रोग को पहिलो शारीरिक पुष्टि थिए। तपाईं एक चिसो र खराब निद्रामा फसाउन बढी सम्भावना थिए। तपाईं त मा स्वागत मा डाक्टर गर्न नै दिन साइन इन छैन अप, उच्च रक्तचाप वा विरक्तलाग्दो पेट को लक्षण पत्ता लगाउन, पछिको मितिमा काम ढिलाइ गर्न प्रयोग गरिन्छ। ढिलासुस्तीको आफ्नो जीवन को तरिका हुन्छन्। दुर्भाग्यवश, तपाईंको मामला मा गम्भीर पुरानो रोग को एक उच्च जोखिम छ।
जब तपाईं बानी एउटा दास बन्न यो अवस्था बाहिर तरिका हेर्न पहिलो कठिन मा, त्यसपछि सबै स्थगित गर्न। अचेतन परियोजनाहरूको एक गुच्छा छ तपाईं अघि भने, समय अगाडी प्राप्त गर्न सम्भव छ? वास्तवमा, त्यहाँ केही काल्पनिक छ। सुरू गर्न, सुरु। कुनै पनि बानी परिवर्तन गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका यसको तत्काल विनाश छ। तपाईं मेहनत गर्न छ भने, आफैलाई पढ्न बस 10 मिनेट दिनुहोस्। के तपाईं आदी छन् हेर्न र परियोजना धेरै बढी समय समर्पण छौँ।
आफैलाई इमानदार हुन
ढिलासुस्तीको रूपमा लामो व्यक्ति आफ्नै कमजोरी इमानदार आफूलाई पहिचान छ रूपमा एक प्रमुख समस्या छ। सतह मूल्यांकन तपाईं निको पार्न मद्दत गर्नेछ। बरु, समस्या गहिरो हेर्न प्रयास र कारण थाह पाउन तपाईं ढिलाइ नगर्न गराउँछ। शायद, गहिरो तल, तपाईँले आफ्नै बल भरोसा छैन, आफैलाई धेरै योग्य व्यक्ति विचार, वा त्यो उचित स्तर मा यो गर्न सक्षम कहिल्यै भनेर विश्वास गर्छन्। र कुनै कुरा कारण के निहित - ज्ञान वा गरिब आत्म-सम्मान को कमी, डाउनटाइम को कारण पत्ता लगाउन, तपाईं आत्म-deprecating व्यवहार अन्त राख्न सक्नुहुन्छ।
एक योजना विकास
व्यावहारिक योजना को विकास संग ढिलाइ विरुद्ध लडाई सुरु गर्नुहोस्। यो चिन्ता सुख र सजिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ। , सुरु गर्न तालिका मा तल बस्न र परियोजना तोड्न सानो व्यवस्थित खण्डहरूमा मा। त्यसपछि सबै कार्य प्राथमिकता प्राप्त र तिनीहरूलाई लागू गर्न हुनेछ कहिलेसम्म अनुमान वितरण। तपाईंको पात्रो सही समय सीमा मा मार्क। तपाईं अगाडि सार्न तपाईं एक मूर्त लक्ष्य अगाडि हेर्न भने मात्र जारी गर्न सक्छन्।
अलमल्याउने को प्रशंसक
तपाईं विचलित प्राप्त गर्छन भने, निम्न विधि संग आफैलाई आर्म: छोटो 20 मिनेट अन्तरालहरू यसको काम तोड्न अप। यो रूपमा केन्द्रित हुन तपाईं बल र केही प्रगति हासिल गर्न मदत गर्नेछ।
प्रत्येक कार्य को लागि विशेष समय तालिका
अन्तमा प्रत्येक कार्य र यसको कार्यान्वयनको समय तय गरिने एक विशेष समय तालिका, मदत गर्नेछ ढिलासुस्तीको पराजित। यो तपाईंलाई एक परियोजना बाट हाम फाल्ने छैन रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ। काम ठूलो र exigeant लक्ष्य सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै कार्यहरू को महत्व को डिग्री कम। तसर्थ, दिन को अन्त मा, तपाईं थकित महसुस हुँदा, तपाईं सजिलो भाग प्रदर्शन गर्नेछन्।
कसरी पहिचान परे एक हप्ताको लागि एक महिना आंतरिक र बाह्य परिवर्तन गर्न?
Eisenhower म्याट्रिक्स - सरल र निःशुल्क समय-व्यवस्थापन
दूरदृष्टि - भविष्यमा निर्माण को एक नयाँ विधि। दूरदृष्टि विशेषताहरु
म "Bifidumbacterin" लाग्न सक्छ गर्भावस्था को समयमा?
"Anauran" खस्छ: analogues, संरचना, प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ र निर्देशन
हेलिकब्याक्टर र उन्मूलन उपचार
मा विज्ञान (छोटकरीमा) विश्वविद्यालय मेरिट को। घर विश्वविद्यालय योग्य। भौतिक, रसायन, साहित्य र रूसी भाषामा विश्वविद्यालय उपलब्धिहरू
Chapped ओठ कस्तो व्यवहार गर्ने?
जैव चिमनी: समीक्षा, बेफाइदा, लाभ, प्रकार र प्रयोग को विशेषताहरु
परिभाषा र प्रतियोगिता को प्रकार
स्केट्स "ज्याक्सन": आफ्नो फाइदा के हो
सेक्स मा Sundresses: चयन र संयोजन
ज्याज Philharmonic, सेन्ट पीटर्सबर्ग: ठेगाना, मुग्ध पार्ने संगीतको, समीक्षा
शरीर को लागि पाउडर को लाभ के हुन्?